အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “One-လမ်းအင်္ဂါဂြိုဟ်ခရီးစဉ်: ဆန်ခါတင်စာရင်းခုနစ်ခုသြစတြေးလျတို့ပါဝင်သည်” မိက္ခေလသည် Safi ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 17 ဖေဖော်ဝါရီများအတွက် 2015 06.18 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ခုနစ်ပါးသောသြစတြေးလျ၏တစ်ဦးဆန်ခါတင်ဖြစ်စေကြပြီ 100 အနီရောင်ဂြိုလ်ကမ္ဘာ၏ပထမဦးဆုံးကိုလိုနီတည်ဖို့အင်္ဂါဂြိုဟ်မှတစ်လမ်းခရီးစဉ်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ.
ဆယ်ကိုးနှစ်အရွယ် Teah, မတ်တပ်ရပ်-up ကလူရွှင်တော် Josh သည် Richards သည်နှင့် geoscientist Electra Navarone သည်အင်္ဂါဂြိုဟ်တစ်ခုမှာပရောဂျက်အတွက်သြစတြေးလျနောက်ဆုံးဆန်ခါတင်အကြားခဲ့ကြသည်, အထဲကနေမှစတုတ္ထကမ္ဘာဂြိုလ်ဖြေရှင်းလုပ်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ထားသည့် 2025.
ဆယ်ကိုးနှစ်အရွယ် Sare Teah ကိုဆန်ခါတင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ဓါတ်ပုံ: အင်္ဂါဂြိုဟ်တစ်ခုမှာ
အဆိုပါစီမံကိန်းသည်, ဒတ်ခ်ျလုပ်ငန်းရှင် Bad Lansdorp တည်ထောင်ထား, တောင်းဆိုချက်များထက်ပိုမိုလက်ခံရရှိပြီ 200,000 Martians ရွက်ပေါက်မှ applications များ, ဒါကြောင့်ဆင်းဖို့စာရင်း whittling ကပြောပါတယ် 50 လူနှင့် 50 အမျိုးသမီးများ.
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်တွေသူတို့ရဲ့နားလည်မှုကို "ပေါ် အခြေခံ. ရွေးချယ်, အဖွဲ့ဝိညာဉ်ကိုဤဘဝပြောင်းလဲစူးစမ်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့၏အစိပ်အပိုင်းဖြစ်သူတို့ရဲ့စိတ်အား,"ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရသည်.
စီမံကိန်း၏အကြီးအကဲဆေးကုသမှုအရာရှိတဦး, Norbert လာ့, လာမည့်ရွေးချယ်ရေးလည် interplanetary အခြေချ၏အထီးကျန်မှုတွေဆီးတားနိုင်ပြင်းထန်တဲ့အသင်းတွေကိုတည်ဆောက်အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်မည်ဟုဆိုသည်.
"အကောင်းဆုံးကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဖြစ်ခြင်းသည်အလိုအလျှောက်သင်သည် သာ. ကြီးမြတ်ပါကစားသမားအောင်မပါဘူး, ဒါကြောင့်ငါကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတိုးတက်မှုဘယ်လောက်ကိုမြင်လျှင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လာမည့်စိန်ခေါ်မှုများအတွက်အတူတကွလုပ်ဆောင်,"Clark ကပြောပါတယ်.
တည်နေရာ scouted လျက်ရှိ မြေကြီးပေါ်အလေ့ကျင့်ရေးအဆောက်အဦများအတွက်. များ၏စာရင်း 100 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရုံမှတစ်နှစ်ရဲ့အလယ်နားမှာအဖြတ်ခံရလိမ့်မယ် 24, လေးယောက်တိုင်း၏အုပ်စုများတွင်အင်္ဂါဂြိုဟ်စေခြင်းငှါစေလွှတ်လတံ့သောနိုင်ငံ 26 အတွက်အစလကြာ 2024.
ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်င်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. အင်္ဂါဂြိုဟ် One တွင်အင်္ဂါဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသို့သွင်းထားရန်ဂြိုဟ်တုကိုတည်ဆောက်ရန်ဒီဇင်ဘာလ၌ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီသည်တက်လက်မှတ်ရေးထိုး 2018. သို့သော်သိသာနည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများကို - ထိုသို့သောအ Martian မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာတစ်ဦးမောင်းနှင်ယာဉ်ဆင်းသက်ပုံကိုအဖြစ်, ဘယ်လိုကြောင့်အာကာသယာဉ်မှူးအပေါ်နက်ရှိုင်းသော-အာကာသဓါတ်ရောင်ခြည်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို minimize လုပ်ဖို့ - မဖြေရှင်းနိုင်ရှိနေဆဲ.
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုစမြေပြင်ကိုချွတ်ရရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ 7.7bn တောင်းမည်, သောကစီမံကိန်းအကြောင်းတစ်ကယ့်လက်တွေ့ကို TV show မှစပွန်ဆာနှင့်လူ့အခွင့်အရေးရောင်းချခြင်းဖြင့်အများအားဖြင့်မြှင့်တင်ပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်. တစ်ဦး Indiegogo ရေးလှုပ်ရှားမှု တွင် 2013-14 ထက်ပိုမိုထမြောက်စေ $400,000. ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ၏အဖြစ်သည်စုစုပေါင်းအလှူငွေလှူဒါန်းမှု အကြောင်းပမာဏ $630,000.
လွတ်လပ်သောသိပ္ပံနည်းကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်, အင်္ဂါဂြိုဟ် One ရဲ့တောင်းဆိုမှုများမှဆန့်ကျင်, အနီရောင်ဂြိုလ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘဝရေရှည်တည်တံ့ "အနုပညာ၏လက်ရှိပြည်နယ်ထက်ပိုနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းနည်းပညာများကို" လိုအပ်ပေလိမ့်မည်.
ကိုလိုနီအတွင်းရှိသီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးဖို့အစီအစဉ်များ, အာကာသတောင်နှင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကျက်စားရာနေရာရေးစပ်, တကယ်တော့အောက်ဆီဂျင်တစ်မွန်းကျပ် oversupply ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ,, သုတေသီကပြောသည်, ပထမဦးဆုံးအာကာသယာဉ်မှူးဟောကိန်းထုတ်ပြီးနောက်သေမယ်လို့ 68 လက်ထက်.
ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးဆန်ခါတင်, မဲလ်ဘုန်းမြို့မှ Dianne McGrath အပါအဝင်, perturbed မဟုတ်. "လူတွေကအင်္ဂါဂြိုဟ်တစ်ခုမှာဖြစ်မသွားမယ့်စဉ်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်, သို့မဟုတ်နာဆာ, ဒါမှမဟုတ်တခြား program ကို, ကျွန်တော်အင်္ဂါဂြိုဟ်သွားပါလိမ့်မယ်, အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေးအတွက်အစီအစဉ်အပေါ်င်,"သူမက Channel ကဆယ်ပါး၏ The Project မှပြောသည်.
"ဒါဟာလူ့စိတ်ဝိညာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့, လေ့လာစူးစမ်းဖို့ကိုဆက်လက်. ငါ၏အစိပ်အပိုင်းဖြစ်ရုံကံကောင်းတာပါ။ "